IINGOMA EZI-100 EZIPHEZULU ZELUTHANDO LWALO LONKE IXESHA - UKWAMKELWA KOMSITHO
Eyona Ukwamkelwa Komsitho Iingoma eziPhambili zoLuthando: Iingoma eziPhezulu ezili-100 zoLuthando lwalo Lonke ixesha
Iingoma eziPhambili zoLuthando: Iingoma eziPhezulu ezili-100 zoLuthando lwalo Lonke ixesha
Jonga i-Knot's ezikhethiweyo zeengoma ezili-100 zothando kuzo zonke iintlobo zokubandakanya uluhlu lwakho lokudlala lomtshato. UAmy Ann ufoto Ukuhlaziywa kwe-Aug 13, 2020
Ukufumana isandi esifanelekileyo somtshato wakho kunokuba ngumsebenzi otyhafisayo, ngakumbi ukuba wena neqabane lakho ninomculo owuthandayo ohlukileyo. Ufuna iingoma zothando ezinokuvusa imvakalelo elungileyo ngexesha elifanelekileyo, njengaxa nonwabela umdaniso wenu wokuqala kunye okanye ukwaziswa njengesibini esitshatileyo. Ngombulelo, kukho ingoma Yothando Ngawo onke amaxesha, ukusuka kwiibhaladi ezimnandi kakhulu ukuya kwiingoma ezimnandi eziya kuthi iindwendwe zakho zicule kunye noluhlu lwakho lokudlala.
Ukukunceda ukuba uqalise ukucwangcisa uluhlu lwakho lokudlala olungenakulibaleka, sibeke ndawonye into esicinga ukuba zezona ngoma zibalaseleyo zothando ngalo lonke ixesha. Ke, bamba inyama kwaye ulungiselele intliziyo yakho. Olu luhlu lweengoma zothando luyakubonisa ukuba loluphi uthando kwaye ngethemba lokukhuthaza ezinye iindlela ezintle zomtshato wakho.
Iingoma zothando zelizwe eziPhambili
Iingoma eziLungileyo zeRock Love
Iingoma eziPhambili zeLandi zeIndie
Iingoma eziPhambili zothando zanamhlanje
Iingoma eziPhambili zothando kuye
Iingoma zothando ezilungileyo kuye
Iingoma eziPhambili zothando zeXesha lonke
Asizikhohlisi. Uluhlu lwethu lweengoma zothando luqala ngeyona nto ibalaseleyo. Ezi ziiklasikhi eziyinyani zoluhlobo kwaye zinokwenza ukhetho olugqibeleleyo lwengoma yakho yokuqala yomdaniso okanye ingoma yokwazisa.
'Emehlweni Akho' nguPeter Gabriel
Le ngoma ka-1986 ivela kwi-albhamu Ke, Kwaye yaboniswa kwifilimu yeklasikhi yeklasikhi Yitsho Nantoni na kwiminyaka emithathu kamva . Iya kukhunjulwa ngonaphakade njengebhokisi yebhokisi yebhola. Ngubani ongamthandi uLloyd Dobler?
'Unody Melody' ngabazalwana abaLungileyo
Ingoma yothando eyingoma evela kwi-albhamu ka-1965 Kanye nje ebomini bam. Kukho iintlobo ngeentlobo zeenguqulelo ezijikelezayo, kodwa le yona yagqitywa ukuba yongezwe kwifilimu Isiporho .
'Ixesha lokuqala ndakhe ndabona ubuso bakho' nguRoberta Flack
Le tshathi-yetshathi yayiqale yabhalwa ngu-Ewan MacColl kumfazi wakhe wexesha elizayo, isenza esinye sezona zipho zibalaseleyo zokuthandana embalini. UFlack wayenza yaziwa ngokongeza kwi-albhamu yakhe ye-1969 Okokuqala Thatha .
'Ixesha emva kwexesha' nguCyndi Lauper
Ingoma ye iconic evela kwi-albhamu ka-1984 Uqhele ngokungaqhelekanga , eyenzekileyo njengelokuqala likaLauper. Yaya ngqo phezulu kwiitshathi kwaye yafumana ukonyulwa kweBhaso leGrammy.
'Ndiya Kuhlala Ndikuthanda' nguWhitney Houston
Rhoqo kuthathelwa ingqalelo umkhondo wokuma kumculo we-1992 Umlindi, ukukhankanywa nje kwale ngoma kubeka imifanekiso kaKevin Costner ephethe uWhitney Houston ezingalweni zakhe.
'Xa Indoda Ithanda Umfazi' nguPercy Sledge
Le ngoma yiklasikhi esele yenziwe kwakhona izihlandlo ngokuthandwa nguBette Midler noMichael Bolton. Kwavela okokuqala kwi-albhamu ka-1966 enegama elifanayo, isenza iSledge ibe ngumdlalo weR & B kwangoko.
'Ingoma yakho' ngu-Elton John
Wonke umntu ufuna ingoma ebhalelwe bona kuphela, kwaye uElton John wayenza yabakho. Le ngoma ye-1970 malunga nokuzinikela okumsulwa kunye nokulula yakhutshwa njengecala le-B Ndise kwi-Pilot .
'(Bangafuni ukuba) kufutshane nawe' ngabachweli
Ukubuyiselwa kwakhona kwi-albhamu ka-1970 Sondele kuwe. Enkosi kumazwi kaBurt Bacharach kunye nelizwi lezingelosi likaKaren, yabamba imbasa yeGrammy yokuSebenza ngokuBalaseleyo kwesiQinisekiso yiDuo, iQela okanye iChorus.
'Uthando lwam' nguPaul McCartney kunye neeWings
I-muse yale ngoma ye-orchestra yothando yothando nguLinda, umfazi wokuqala kaPaul McCartney. Ibambe umahluko wokuba yeyona track ithengiswa kakhulu kwi-albhamu yabo ye-1973 Isantya esibomvu seRose .
'Olona thando lwam lubalaseleyo' ziiMvakalelo
Le bhalla yokuqhubela phambili kwi-albhamu ka-1977 Vuyani eyabhalwa ngamalungu amabini eMhlaba, Umoya kunye noMlilo. Yahlala phezulu kwiitshathi iiveki ezine ngqo ngaphambi kokuba iqhubeke nokuphumelela iBhaso leGrammy.
'Uthando olungapheliyo' nguDiana Ross kunye noLionel Richie
Abavelisi befilimu Uthando olungapheli bebefuna ingoma yokuphumla kwifilimu yabo eneenkwenkwezi zeBrooke Shields. Ngenxa yoko, le ngoma edumileyo kaRoss noRichie yazalwa. Kwakhona kwabonakala kwi-albhamu yabo ye-1981 Kutheni izidenge ziwa eluthandweni .
'Amandla othando' nguCeline Dion
Ukubuyiswa okunomdla kunye nokunyanisekileyo kwi-albhamu ka-1993 Umbala wothando lwam . Ekuqaleni yabhalwa nguJennifer Rush ngenxa yesoka lakhe uSteven, kodwa uluhlu lukaDion oluphefumlayo luyenza iphile.
'Ingoma ka-Annie' nguJohn Denver
UDenver wabhala oku ngo-1974 kwi-albhamu Buyela Ekhaya kwakhona ngelixa wayekhwele ilifti. Inkuthazo yayingumfazi wakhe, u-Annie, onomona kuye wonke umntu ophulaphulayo le ngoma isuka entliziyweni.
'Ndifuna Ukwazi ukuba Luyintoni Uthando' nguMphambukeli
Le ngoma ivela kwi-albhamu ka-1984 Into evuselelayo ibonisa ngokugqibeleleyo ukuphelelwa lithemba kunye nethemba lothando. Le mizila ithi konke: 'Ebomini bam bekukho intlungu kunye nentlungu / andazi ukuba ndingaphinda ndijamelane nayo / Andinakuyeka ngoku, ndihamba kude, ukutshintsha ubomi bobulolo.'
'Uyaphambuka kuwe' nguMadonna
I-ballad e-sultry eyabonakala kwi-soundtrack ye-1985 yefilimu Umbono wokufuna . Kwakuyi-foray yokuqala yokuhlabelela kwiingoma zomdaniso ohamba ngokukhawuleza, kwaye yamzisa ukutyunjwa kweGraam ye-Grammy ye-Best Female Pop Performance Vocal Performance.
'Ulilanga Lobomi Bam' nguStevie Wonder
Umculo wokuma kwi-albhamu kaWonder's 1973 Incwadi Yokuthetha , Le ngoma ikhethwe yiGrammy inyuselwa phezulu, iyathandeka kwaye iyancuma. Akumangalisi ukuba izuze elona bhaso liBalaseleyo lokuSebenza kwaBantu abaDumileyo.
'Ndiyazi ukuba ndiyakuthanda' ngeSavage Garden
Inombolo yokuqala yabetha kwi-albhamu ka-1999 Uqinisekiso lonto yenze ukuba wonke umntu wasetyhini aphelelwe ngamandla. Iintliziyo ziyagungqa xa uDarren Hayes serenades 'Ndiyazi ukuba ndiyakuthanda ngaphambi kokuba ndidibane / ndicinga ukuba ndikuphuphe ebomini.'
'Ndihlala Ndikuthanda Ngonaphakade' nguDonna Lewis
Wonke umntu ufuna uhlobo lothando ngonaphakade. U-Lewis usinike umhobe wokuzinikela ngonaphakade ngo-1996, kwi-albhamu yakhe Ngoku eMzuzwini . Ikwapakishwe yimifanekiso emininzi ebumbongo, enje ngala 'Iintsuku zemvula ezifudumeleyo zibuyelela kum ngokukhawuleza / Imayile zomoya wasebusuku ongenamoya.'
'Intliziyo yam iya kuqhubeka (Uthando Umxholo ovela' kwiTitanic ')' nguCeline Dion
Intlungu Ititanic Tune thatha ubume bothando oluhlala luhleli kunye nomnqweno oza nawo. Ingoma yavela okokuqala kwi-albhamu ka-Dion ka-1997 Masithethe ngothando , kodwa i-blockbuster hit yenze ukuba ibe yiklasikhi yangoko nangoko.
'Phezulu apho Sikhona' nguJoe Cocker noJennifer Warnes
UCocker kunye noWarnes bayikhupha le ngoma yothando yonyaka we-1982 kwifilimu Igosa kunye noMnumzana . Kwakusele kushiyekile kumgangatho wegumbi lokuhlela, kodwa ugqibe ukuphumelela iAward Academy kunye neGrammy.
UDerek Bedwell Ukufota
Ngaba ufuna ukongeza umtsalane omncinci kuluhlu lwakho lokudlala lomtshato? Cinga ukutyibilika kwezinye zeengoma zakudala ezivela kuReba McEntire, uKenny Rogers, uDolly Parton kunye nokunye.
'Umoya Ngaphantsi Kwamaphiko Am' nguGary Morris
Inguqulelo kaBette Midler ibonakalisiwe kwimuvi ye-tearjerker Iilwandle . Nangona kunjalo, uMorris wakhupha le ntetho yelizwe ebangela ukuba iphazamise ilizwe ngo-1983 njengenxalenye yakhe Kutheni le Nenekazi kutheni icwecwe, elinyuke laba linombolo yesine kwiitshathi.
'Ndiqhubeka noLovin' Wena 'nguReba McEntire
UMcEntire ukhuphe le ngoma yokwenyani yobomi kwi-albhamu yakhe ka-2010 yesihloko esifanayo. Iphonononga iimvavanyo kunye neembandezelo zothando, ngomgca omnye wokuma ukhumbula indlela 'Ngamanye amaxesha ndifunga ukuba kunokuba lula ukuphosa itawuli / Ngenye imini siza kujonga emva sithi, Jonga kuthi ngoku.'
'Ngeminyaka' nguKenny Rogers
Uthando alusoloko luhlobo lwe-champagne kunye neeroses, esisihloko sikaRogers '1981 hit kwi-albhamu Yabelana Ngothando Lwakho. Ithetha ngokuguga kunye nomntu omthandayo, nokuba kuya kuhamba nzima.
'Khumbula xa' ngu-Alan Jackson
I-crooner yelizwe yabhalela i-albhamu yakhe ka-2003 Amanani amakhulu kakhulu uMqulu II , Inkuthazo ibubudlelwane bakhe kunye nomfazi wakhe ngelo xesha. Iingoma ezinje ngo'Khumbula xa i-30 ibonakala indala kakhulu / Ngoku jonga 'ngasemva / lilitye le-steppin', jonga kuthando ngokujonga ngasemva.
'Xa ndathi ndiyenzile' nguClint Black kunye noLisa Hartman Black
I-duet yelizwe equka iqela lomyeni nenkosikazi. Ivela kwi-albhamu ka-1999 Umbane kwaye yenye yeengoma zokuya kwii-DJs zomtshato. Amanye amazwi abonisa nezifungo, ezinjengokuthi 'Thembeka kwaye unyaniseke, uzinikele kuwe / Yiloo nto bendinayo engqondweni xa ndisithi' ndiyayenza. '
'Ndiza Kuhlala Ndikuthanda' nguDolly Parton
Inguqulelo kaWhitney Houston ingalufumana lonke uzuko, kodwa uguqulelo lukaParton lwale ngoma imnandi ikwayintsimbi. Ivela kuye ngo-1974 UJolene , Ezele kukubhangiswa kweetrone zelizwe ezikumkhondo.
'Ukwenza Izikhumbuzo Zethu' nguKeith Urban
I-hit enomdla kunye ne-blush-efanelekile kwi-albhamu ka-2004 Ndilapha . Imigca efana 'Ukuba kukho ubomi emva koku / ndiza kubakho ukudibana nawe ngobuso obushushu, obumanzi,' baqinisekile ukwenza iindwendwe zomtshato zityhafe.
'Ngonaphakade kanaphakade, Amen' nguRandy Travis
Eli lizwe eliqaqambileyo leklasikhi linikezela ngokuthabathela emhlabeni ukuthatha uthando lwanaphakade. UTravis wayirekhoda kwi-albhamu yakhe ka-1987 Ngonaphakade & Njalo , kwaye yathatha ekhaya iGrammy yelizwe eliGqwesileyo kunye neNgoma yeNtshona.
'Usenguye Lowo' nguShania Twain
UTwain wongeze le ngoma yothando kwi-albhamu yakhe ka-1997 Yiza ngaphaya . Yayibhalwe ngokudibeneyo ngumyeni wakhe, uMutt Lange. Baye baqhawula umtshato, kodwa ilizwe le-ballad lisesona sitishi somtshato.
Iingoma ezinje 'Ngalo lonke ixesha amehlo ethu edibana / Le mvakalelo ngaphakathi kwam / iphantse yangaphezu kwento endinokuyithatha' yenza le ngoma yothando ibe yindawo yokubonisa. Kwavela okokuqala kwi-albhamu ka-1999 I-Grill yodwa , kwaye kwangoko wenyuka waya phezulu kwiitshathi zeBillboard.
'Uthando, mna' nguCollin Raye
Umntu othandekayo ngo-1991 kwi-albhamu Konke endinako ukuba kuko . Yenye yeengoma zelizwe eziphambili zothando lwalo lonke ixesha kuba inento encinci yayo yonke into-inostalgia, uthando lwanaphakade kunye nokudibana kosapho.
'Ndiwela Intliziyo Yam' nguGeorge Strait
Le gem evela kwi-1992 Ilizwe elimsulwa Ingoma yesandi bubungqina bokuba iStrara iyayazi indlela ejikeleze intliziyo. Wonke umntu ufuna ukuva isithandwa sakhe sitsho la magama: 'Ndiwela intliziyo yam kwaye ndithembisa uku / Nika konke endinokukunika kona ukuze onke amaphupha akho azaliseke.'
'Xa Ungathethi Nto Konke' nguAlison Krauss
Eli lizwe le-ballad lika-1994 libonakaliswe UKeith Whitley: I-albhamu yesiHlomelo. Ikwahlawula irhafu kubathandi kuyo yonke indawo abanokudlulisa ukuzinikela kwabo ngokungapheliyo ngaphandle kokuthetha.
'Oongqatyana ababini kwiNkanyamba' nguTanya Tucker
Ingoma yothando yelizwe likaTucker kwi-albhamu yakhe yowe-1992 enegama elifanayo ibalisa ibali lesibini esoyisa imiqobo. Umhlaba uthi abasokuze bayenze, uthando luthi bayakuyishwankathela imbono yothando lokwenene.
'Ukwenza Uziva Uthando lwam' nguGarth Brooks
Uhlobo olulula-kodwa lweemvakalelo ukusuka kwi-1998 Ithemba leFlats isandi. Kukho ezinye iinguqulelo ezivela kubaculi abakhulu njengoBilly Joel noBob Dylan, kodwa le nguqulo ipakisha i-punch.
Iliwa eliqhelekileyo alikaze liphume ngesitayile, kunye nabazali bakho, oomakazi nootatomncinci baya kubulela ngokungazenzisiyo kwezi ngoma zilandelayo kuluhlu lwakho lokudlala… emva kokuba begqibile ukuzaphula phantsi kumgangatho wokudanisa.
'Intwana encinci ephambeneyo ebizwa ngokuba luthando' nguKumkanikazi
Umphathi kaKumkanikazi, uFreddie Mercury, wabhala le ngoma iphambili yothando xa wayehleli ebhafini yehotele. Kubonakalisiwe kwi-albhamu yabo ye-1979 Umdlalo Kwaye ndaya phezulu kwiitshathi iiveki ezine ezilandelelanayo.
'Ndiza kuma ecaleni kwakho' ngabazenzisi
Le rock ballad ka-1994 evela kwi-albhamu Ekugqibeleni kwabazimeleyo malunga nokunamathela kunye, nokuba indlela iya kuba namatye. Njengoko i-chorus ihamba: 'Ndiza kukuma, ndiza kukuma / Akuyi kuvumela mntu ukuba akwenzakalise.'
'Xa Umthanda umfazi' ngohambo
Ingoma yomculo wepiyano emangalisayo evela kwi-albhamu ka-1996 Ukulingwa ngomlilo . Iintliziyo ziyanyibilika xa amakhonkco egolide kaSteve Perry ebotshiwe: 'Xa umthanda umfazi / Uyalibona ilizwe lakho ngaphakathi kwamehlo akhe.'
'Uthando Lokwenene Lulindile' yiRadiohead
I-Radiohead ayaziwa ngokuba yimizila efanelekileyo yomtshato. Nangona kunjalo, le ngoma yothando lwerwala kwi-albhamu yabo ka-2001 Inokuba ndiphosakele Kukhethekile ngaphandle, kunamazwi anje ngala: 'Ndiza kuzitshonisa iinkolelo zam / Ukufumana abantwana bakho.'
'Amahashe Asendle' ngamatye aqengqelekayo
Uyazi ukuba unento elungileyo ehambayo xa nditsho namahashe asendle angarhuqa isithandwa sakho. Le classic ye-1971 kwi-albhamu Iminwe encangathi igcwele ukuzinikela kunye nokulangazelela, okwenza ukuba ibe sesinye sezona zibhengezo zoyikekayo zothando kwimbali yamatye.
'I-Bitter Sweet Symphony' ngeThe Verve
I-orchestral rock n 'roll yobugcisa kwi-albhamu ka-1992 Iingoma zasedolophini . Ivavanya utshintsho kubomi, yaphula imikhwa yakudala, iqala ngokutsha kwaye inika uthando ithuba lokukhokela indlela.
'Uthando olupheleleyo lweLotta' nguLed Zeppelin
Bambalwa kakhulu abantu, ukuba bakho, abanokumamela le Led Zeppelin classic ngaphandle kokuqhekeza isiginci somoya. Kubonakalisiwe kwi-albhamu yabo ye-1969 Led uZeppelin II , kwaye isemi kuvavanyo lwexesha.
'Uthando loBomi bam' nguKumkanikazi
U-Queen akanako ukunqongophala kwemihobe ye-epic kwikhathalogu yabo. Ingoma yokuphula intliziyo ibuyela kwi-albhamu yabo ka-1975 Ubusuku kwi-Opera , kwaye ijongene nothando olulahlekileyo kunye nokunqwenela.
'Ingaba olu luthando?' NguMhlophe
'Ndiyakuva uthando lwam kuwe / Ukukhula ngamandla imihla ngemihla' ngenye yeendlela zokuma ezivela kule rockin 'ballad, ephuma kwi-albhamu ebizwa ngokuba yi-Whitesnake ka-1987. Ithetha kuye nabani na ofumene uthando lokwenyani okokuqala, kwaye ikatala iyqinisekile ukukrazula iintliziyo zakho.
'(Ndivele) Ndafa kwiingalo zakho' ngokusika abasebenzi
Ama-1980 okugqibela ahlabelela ixesha elide kwimitshato, yayibonakaliswe ngo-1986 Ukusasaza i-albhamu kwaye yenyuka yaya kwi-charts iiveki ezimbini zilandelelana. Ukusukela ngoko yenze ukubonakala kwizandi zomculo bhanyabhanya onje Zange Wanga kwaye Umatshini oshushu weTub .
Akukho ukubala okuphezulu kwengoma yothando kugqityiwe ngaphandle kweBeatles. Le rock yeklasikhi ye-1969 yaziwa njengeyona idumileyo Indlela yeAbbey icwecwe labhalwa nguGeorge Harrison lomfazi wakhe, uPattie.
Le bhalla yamandla kwi-albhamu ka-1983 Imida yenye yeengoma zohambo ezimbalwa ukuswela ikwayari. Konke malunga nokuhlala usemathandweni, naxa nithe nahlukana, kwaye niwa ngamakhanda ngalo lonke ixesha nidibana kwakhona.
'Wenza ulonwabo lothando' nguFleetwood Mac
Uhlobo oluthandayo-lweenwele-zakho ezantsi zengoma yothando ukusukela ngo-1977 Amarhe Ialbham. Inethemba, iyonwabisa kwaye iyazonwabisa, ngaphandle kokuba wonke umntu eFleetwood Mac wayenemicimbi yobudlelwane ngelo xesha.
Ibali elincomekayo lokuzinikezela, uthando kunye nothando olungenakutya. Ngo-1984 wabetha kwi-albhamu IChicago 17 igcwele imigca ekhuthazayo efana nale: 'Uyintsingiselo ebomini bam / Uyinkuthazo kuwe.'
'Ngonaphakade' ngabaFoo Fighters
Ingoma ye-acoustic yale ngoma kwi-albhamu yabo ka-1997 Umbala kunye neMilo yingoma yomtshato ekufuneka uyenzile. Amanye amazwi akhe amnandi athi 'Phefumlela ngaphandle / Ke ndiyakuphefumla' kwaye 'Kwaye mna wonder / Xa ndicula kunye nawe / Ukuba yonke into inokuziva iyinyani ngonaphakade. '
USteven Michael Photography
Baphembelele abatshana bakho nabazukulwana bakho kunye nazo zonke ii-audiophiles kusapho lwakho ngeengoma ezimbalwa zothando ze-indie ezivela kwamanye amabhanti e-indie arhangqileyo.
'Ukulala ngokuhamba' ngeMouse ethobekileyo
Ukubuyiswa kwakhona kweklasikhi ye-1959 nge-indie twist. Le ngoma yothando ivela ngo-1996 Ngaphakathi 8 i-albhamu kunye neempawu zedayet ethi ihambise kwangoko umphulaphuli kumaxesha alula.
'Sisadibene' nguMac DeMarco
Ingoma emnandi ebekiweyo kunye ne-indie evela kwi-albhamu ka-2012 2 . Imigca enje 'Kwaye apho ndiya khona, usecaleni lam isiqingatha sobomi bam kunye / luthando olulula, luhambelana njengeglavu ukusuka phezulu kunye' zidityaniswe ngesigingci esimangalisayo se-acoustic.
'Kukho ukuKhanya okungaze kuphume' ngabakwaSmith
Le indie gem ivela kwi-1986 Ukumkanikazi ufile . Ngamazwi anamandla, anje ngala 'Ukuba ibhasi enesiphekepheke esitshayisa / Ukufa ecaleni kwakho yindlela yasezulwini yokufa' ayisiyiyo eyentliziyo etyhafileyo, kodwa zizinto zomgangatho wokudanisa zika-1980.
'Ubisi kunye nobusi' ngokude njengeeNgonyama
Kuyathandeka, kuyathandwa kwaye kuvuza imifanekiso ebonakalayo. 'Ubisi nobusi' isichotho esivela kwi-albhamu ene-band ene-2006 kwaye igubungela imiba emnyama yothando, njengokulahleka, ukungcatshwa kunye neengxabano zothando.
'Usuku lokuqala lobomi bam' ngamehlo aqaqambileyo
'Obakho bubuso bokuqala endibubonileyo / ndicinga ukuba bendiyimfama ngaphambi kokuba ndidibane nawe' isishwankathelo sale ngoma yothando ye-indie malunga nothando lokwenyani lobomi. Yayibonakaliswe kwi-albhamu ka-2005 Ndivukile ngokubanzi, Kusasa.
'Ngaphakathi nangaphandle' nguFist
Inguqulelo yanamhlanje ye-Bee Gees hit ebonakala kwi-Feist's 2004 Mayife icwecwe. Ine-indie jazz vibe, ukubetha okumnandi kunye nokuncedisa umphefumlo.
'Ndiya kugcina izinto ezimbi kuwe' nguDamnwells
Kuhlala kukho iimpawu ezixelayo zothando lokwenene, njengokugcina 'ixabiso elingaphantsi kweendleko' okanye ukondla ezinye iifriji zakho nge-steak sauce. Obu buncwane buvela kwi-albhamu ka-2003 IiBastards zeBeat ivavanya ukukhanya, ubuqili ecaleni kwezothando.
'Intombi kaBlower' nguDamien Rice
Ilayisi yanika esi sipho sokulangazelela kunye nezwi lokungcungcuthekisa kwihlabathi nge-albhamu yakhe ka-2002 OKANYE . Ukumamela le ngoma imbi ye-indie ikushiya ungonwabanga esifubeni kunye neqhuma emqaleni.
'Ezi ndawo ziphakamileyo' yiPosi yeNkonzo
Amaqabane afuna umkhondo we-indie we-upbeat uya kuthandana nalo ka-2003 engatshatanga Ndiyanikezela . Ivele kwimiboniso eyahlukeneyo eyahlukeneyo, kubandakanya Indawo egreyi .
'Ukuwa kancinci' nguGlen Hansard kunye noMarketa Irglov ukuya
Ukuthanda enye ebalulekileyo ngokubaluleka kunye nokubhitya kukuziphatha kwale duo. Kwaqala ukuvela kwisandi somculo bhanyabhanya ka-2006 Kanye , kwaye iphinde yenziwa ngokuthandwa nguJosh Groban kunye noIl Divo.
Ngaphambi kokuba uColdplay ayenze ibe nkulu yayiliqela le-indie elalizokurekhoda le ngoma ngo-2005 X&Y icwecwe. Yayibhalelwe umfazi ongasekhoyo kaChris Martin, owayesandula ukuswelekelwa ngutata.
'Vuka' nguSerenade weSibini
'Ngokubonakala kwakho konke, ukumfamekisa amehlo am / andikhumbuli okokugqibela ndaziva ngathi ndenza / Uyingelosi efihliweyo' icwangcisa ithoni kolu hlaselo lwe-indie hit. Kwavela kwi-albhamu enegama lokuqala ngo-2007, eyayiyimvakalelo ye-MySpace.
'Olona Luckiest' nguBen Folds
I-piano ballad evela ku-Ben Folds ka-2001, I-Rockin 'iidolophu . Ngokunyumbaza kweendlovu kunye namazwi anyanisekileyo, uBen uxelela ibali lokufumana umphefumlo wakho, kunye nekamva elikhokelela ekuthandeni.
'Iintsuku zeNja zidlulile' nguFlorence kunye noMatshini
Enye yeendlela zokuma kwi-albhamu ka-2009 Amaphaphu . 'Ulonwabo lumbethe njengololiwe kumkhondo / Ukuza kuye ebambekile nangoku kungabuyi mva' ngamazwi okuvula kule indie ballad, efaka amazwi amangalisayo kaFlorence.
'Kanye Njengezulu' ngoNyango
URobert Smith, imvumi ephambili ye-The Cure, wabhala le ngoma emva kohambo elwandle kunye nalo uza kuba ngumfazi kungekudala. Bayidibanisa neyabo I-albhamu ka-1987 Ndiphuze, Ndiphuze, Ndiphuze kwaye amagcisa angenakubalwa ebeyigubungela ukusukela ngoko.
IVivid Studios Inc.
Ungalibali malunga neyona mihla ibalaseleyo yokufudumala kwentliziyo. URihanna, uAdele, uSia nabanye bebekhupha iingoma zothando eziza kuthi ngenye imini zibe zezakudala kumalungelo abo.
'Yenza Uthando Lwam' nguAdele
U-Adele ligunya lamandla elizwi, kwaye ukubuyiswa kwakhe yile Bob Dylan classic ithenda, inothando kwaye inomdla ngokupheleleyo. Ngenye yezinto eziphambili kwi-albhamu yakhe yokuqala ye-2008 19, kunye nepiyano yenza ukuba ilizwi lakhe lomphefumlo libambe ukukhanya.
'Ukuleqa iimoto' nguPatroli weSiqhwa
Izwi likaSilky kunye nekatala ecocekileyo nelula ngasemva yenza ukuba lo ngo-2006 ubethwe Amehlo Avulekile uthando olunengoma. Yahlala kwiitshathi ngaphezulu kweminyaka emibini e-United Kingdom, kwaye yavela kwiinkqubo ezininzi zeTV.
'Sifumene Uthando' nguRihanna kunye noCalvin Harris
Ingoma yothando emangazayo egxile ekoyiseni iingxaki zokufumana uthando kunye nothando kwindawo 'engenathemba.' Yabonakala kwi-albhamu yakhe ka-2011 Thetha loo Ntetho , ukuhlangabezana nokubaluleka okubalulekileyo kunye nokuphikisana.
'Ingoma yothando' nguSara Bareilles
Isihloko salo pop ka-2007 sivela Ilizwi elincinci itsho yonke. Yayifumana i-Bareilles ukutyunjwa kweGrammy kwaye yamgcina kwiitshathi zeBillboard Hot 100 kwiiveki ezingama-41.
'Crazy In Love' nguBeyonce kunye noJay-Z
Isidima sokuqala sikaBeyonce ukusukela ngo-2003 Ngengozi kuThando yi-up-tempo ode yokuthandana okungalawulekiyo. Ikwabonisa nomyeni wakhe, uJay-Z, owongeza umnxeba we-rap kumxube.
'Ndingowakho' nguJason Mraz
Le setter-setter ivela kwi-albhamu ka-2008 Siyacula. SiyaDanisa. Siba Izinto. Yahlala kwi-Billboard Hot 100 kwiiveki ezingama-76 kwaye yaqhubeka nokufumana i-Grammy nod yeNgoma yoNyaka kunye nokuSebenza ngokuBalaseleyo kweVocal Pop.
'Sikelela iNdlela eyaphukileyo' nguRascal Flatts
Isimbozo selizwe lothando lweNitty Gritty Dirt Band elithengise iikopi ezingaphezu kwezigidi ezibini. Kwavela okokuqala ngo-2004 UHana Montana: Umboniso bhanyabhanya Isandi, kodwa imigca enje 'Iphupha elide elahlekileyo lindikhokelele apho ukhoyo' lenze ukuba lilungele abaphulaphuli abaqolileyo.
Lo msebenzi wobugcisa kaSia ka-2004 wawusuka Fakela umbala Omncinci igcwele kukulangazelela nokuzisola. Nangona kunjalo, ikwajongana nesihloko sokuthanda umntu kakhulu kangangokuba banokukufudumeza bakuphefumlele ngaphakathi, okunzima kakhulu.
'Ukopha Uthando' nguLeona Lewis
Le ngoma, eyayibonakaliswe ngo-2007 UMoya i-albhamu, iphefumlelwe bubudlelwane obude. U-Lewis wayikhupha emva nje kokuphumelela ixesha lesithathu kumdlalo we-TV wase-UK, Ingxaki yeX , kwaye ichithe iinyanga kunomathotholo.
'Ibali Lothando' nguTaylor Swift
I-muse yale ngoma inyanisekileyo kwaye isuka entliziyweni yayiyinto entle kaSwift, ngoncedo oluncinci oluvela kuShakespeare. Kwavela ngo-2008 Ukungoyiki i-albhamu kwaye yabanjwa kwiBhaso loMculo woMculo weLizwe kwiVidiyo yoMculo yoNyaka.
'Intombazana ePusher Uthando' nguJustin Timberlake
I-Timberlake ijonga imeko yokulutha kothando kule hit yakhe ye-2013 Amava angama-20/20 icwecwe. Imigca enje ngala: 'Kukuqengqa kwaye uyeke iqhubeke ngemithambo yam /' Isizathu sokuba ndihlala ndizibona iinkwenkwezi ezikude xa ndikunye nawe 'kukwazise ukuba iyakuba lolunye uhlobo lwebhaladi yothando.
'Iya kunetha' nguBruno Mars
Enye yeengoma zokuma kwi-2011 I-Twilight Saga: Ukuphula iDawn-Icandelo le-1 isandi. Ngamazwi anjengokuthi 'Ke gcinani engqondweni yonke imibingelelo endiyenzayo' / Ukukugcina ecaleni kwam / Ukukugcina ungahambi emnyango, 'uMars uphonononge iimpembelelo zothando olungalunganga.
'Ndiyakuthanda' nguMiley Cyrus
Ukudumisa kunye nokuqaqanjelwa ngumxholo wale ngoma yanamhlanje yothando evela kuKoresi ka-2013 Bangerz icwecwe. Ungena kwingcinga yokufumana indawo yokusabela kunye nomntu omthandayo kwaye angafuni nto ngaphandle kokulala nabo ngonaphakade.
'Indlu yam' nguKacey Musgraves
'Ukuba andinakukuzisa endlwini yam / ndiza kuyizisela indlu yam' isishwankathelo esifanelekileyo sengoma yothando ebambekayo neyintsimbi evela kwi-albhamu ka-2013, Itreyila efanayo Ipaki eyahlukileyo. Iyinyani, iyathandeka kwaye iphantsi komhlaba, eyenza ukuba ibe ngumdaniso womtshato ogqibeleleyo.
'Sebenzisa Umntu' nguKumkani kaLeon
Umkhondo werwala wale mihla ofumana owakho Ukubetha iinzwane kunye nokuphakama kwentliziyo. Kwavela ngo-2008 Ebusuku kuphela icwecwe kwaye yaphumelela ibhaso leGrammy yeRekhodi yoNyaka.
U-Ashley Durham Photography
Nokuba umfo wakho akathandabuzi ngothando lwakhe okanye ukuthandana ngokufihlakeleyo entliziyweni, uya kuyivuyela into yokuba unokongeza ezimbalwa kwezi ngoma zothando kuye kuluhlu lwakho lokudlala lomtshato.
'Eyona ilungileyo' nguTina Turner
Oku kubuyiswa kwengoma yothando lukaBonnie Tyler kubonisiwe kwi-Turner ka-1989 Imicimbi yaNgaphandle icwecwe. Ingoma inesabelo sayo esifanelekileyo samatye abambekayo, amazwi anomphefumlo kunye nokuqhayisa ngokungathandekiyo ngesithandwa sakhe 'esingcono kunabo bonke abanye.'
Isimbozo sikaJennifer Rush's chart-topper, eyabonakala kwi-Dion's 1993 Umbala wothando lwam . 'Ilizwi lakho lifudumele kwaye lithambile / Uthando endingenakulushiya' yenye yeendlela ezininzi ezithandekayo kule ngoma inye yokuqala.
'Njengokuba Ndikufumene' nguLily Allen
UAllen wayifaka le ngoma intle, kodwa ingacacanga, yothando ngo-2014 wakhe USheezus icwecwe. Igcwele imigca engalibalekiyo eya kumenza ancume, enje ngala: 'Kubonakala ngathi bekuyizolo oku ubukhe wanomnye umntu / Kungekudala njengoko bekugqityiwe nangona bendikubanga ngokwam.'
Enye ingoma yokuthatha uluvo lwayo kubathandi bakaShakespeare abanqamle iinkwenkwezi. 'Cherish' ivela kwi-albhamu ka-1989, Njengomthandazo , eyayikukhululwa kwesine kukaMadonna. Inee-doo-op nuances, ezenza enye yeebhaladi zakhe ezivuyayo ngakumbi.
'Ndikhe ndawela ehlabathini' nguDar Williams
Nabani na okhe wafumana amava okuhambahamba unokuzixubusha kule ngoma ukusukela ngo-2012 Ngexesha likaThixo icwecwe. Iingoma ezinje 'bendijikeleze ihlabathi, kodwa konke endikubonayo / Ngaba ngala maxesha sinawo, ulilizwe lonke kum' phonononga umbono wokuba ukude nendoda oyithandayo.
'Ungowam' nguPatsy Cline
Kubantu abathanda iqabane labo ukuba bathathe uxanduva kwaye babize i-dib, i-Cline's ballad ukusuka kwi-1962 Ngokwakho i-albhamu kokona kukhethiweyo. Nokuba angaya phi okanye abaleke angene kuyo, indoda yakhe iseyeyakhe, kwaye yeyakhe yedwa.
'Ukuba andikaze ndidibane nawe' nguBarbra Streisand
UStrisand uyibhanti kule ngoma evela Uthando Olunjengolwethu Ngo-1999. Wonke umntu ufuna ukuva iqabane lakhe limxelela ukuba 'ukuba andikaze ndibubone ubuso bakho / Eli hlabathi, eli lizwe beliya kuba yindawo ebandayo, ndiyabheja.'
'Indoda enomntwana ngamehlo akhe' nguKate Bush
Ebhalwa xa uBush wayeneminyaka eli-13 ubudala, le ngoma ephuphayo kunye ne-ethereal yabonakala ngo-1978 kwi-albhamu Ukukhaba ngaphakathi. Yayibhalwe kwi-United States nase-United Kingdom, emva koko yagutyungelwa ngabantu abanjengoCharlotte Church kunye noHue no-Cry.
'Ayikho enye indoda' nguChristina Aguilera
Umvuzo onomphefumlo, onobubele kunye nongaphezulu-phezulu obonisa i-albhamu ka-Aguilera ka-2006, Buyela kwiZiseko . Inamacebo eempembelelo zomculo we-retro kwaye iphefumlelwe ngumyeni wakhe, awayetshate naye kunyaka ongaphambili.
'Indoda yobugqi' ngentliziyo
Ingoma ekhuthaza ukuzonwabisa ebonakalisiweyo kwi UDreamboat Annie icwecwe elisuka ngo-1976. Amagama apheleleyo azele yimifanekiso eqingqiweyo kwaye axelela ibali lomntu obhinqileyo osemtsha othandana nendoda endala.
UChristina Carroll Ukufota
Yenza umtshakazi wakho azive njengeyona ntombazana ikhethekileyo emhlabeni ngezi ngoma zingalibalekiyo nezinyibilikayo. Ukuba awufumani magama afanelekileyo okuchaza uthando lwakho ngaye, vumela uMichael Bolton, uEric Clapton kunye noLingo bakwenzele.
'Intombazana yam' zizilingo
Imnandi kakhulu kwaye imsulwa, le ngoma yothando yakudala iyavela ngo-1965 Izilingo Zicula Umsi icwecwe. Uninzi lwabantu luyayikhumbula kwimovie ye-tearjerker enegama elifanayo.
ulitshintsha njani igama lakho xa utshata
'Umhle kakhulu' nguJoe Cocker
Le ngoma ivela kwi-albhamu ka-1974, Ndiyakwazi Ukuma Imvula Encinci , uqinisekile ukukwenza udangele. Ngubani ongafuniyo kuye ukuba athi: 'Uyinto yonke endinethemba layo / Uyinto yonke endiyifunayo?'
'Inenekazi' nguKenny Rogers
Qala ngeetalente zokubhala zikaLionel Richie, phosa kwizwi likaRogers elisulungekileyo kwaye ugqibela ngale ballad inomdla evela UKenny Rogers ubalaseleyo kwiiHits icwecwe elavela ngo-1980. Lafumana indawo kwiitshathi zomculo ezine ezahlukeneyo: Ilizwe, iHot 100, iContemporary yaBadala, kunye neeNgoma eziMnyama eziMnyama.
'Inenekazi eliBomvu' nguChris de Burgh
Umfazi kaBurgh, uDiane, yinkosikazi ebomvu ebomvu kwingoma, ebonakala kwi-albhamu yakhe ka-1986 Ekukhanyeni . Ibalisa ibali lokudibana nomntu kunye nokukhumbula yonke into malunga nokuhlangana okokuqala.
'Ngobusuku obumangalisayo' ngu-Eric Clapton
UPattie Boyd wayekhuthazwa yile mzila wokuma ngo-1977 Kancinci icwecwe. Kuyabonakala ukuba wayibhala ngelixa wayelungiselela itheko. Uninzi lwabasetyhini bayancwina kwaye bakhalaze xa bethatha ixesha labo benxiba. Wafumana ingoma.
'Xa Indoda Ithanda Umfazi' nguMichael Bolton
Olu luphuculo olunyibilikise iintliziyo ezingenakubalwa xa lavela ngo-1991 Ixesha, Uthando kunye nokuThabatheka. Ifumene iBolton iBhaso leGrammy kunye nendawo ephezulu kwiitshathi.
'(Yonke into endiyenzayo) Ndiyenzela Wena' nguBryan Adams
Yonke intombazana ingathanda ukuba kuphela kwesizathu sokuba indoda yenze yonke into. Uninzi lwabantu luyayikhumbula le nto URobin Hood: INkosana yamasela Isandi, kodwa ikwaboniswa ngo-1991 Ukuvusa Abamelwane icwecwe.
'Thatha Ukuphefumla Kwam' ngeBerlin
Ngo-1986 Umpu ophezulu I-classic eyathatha ekhaya i-Award Academy kunye neGlobal Globe. Iphila ngokuvisisana negama layo ngokususa umphefumlo wakho kwaye iphinde iphinde ivuyise uthando olutsha.
'IHero' ngu-Enrique Iglesias
Abasetyhini kuyo yonke indawo bafuna ukuba i-Iglesias ibe ligorha labo xa le ngoma yaphuma ngo-2001 Ukubaleka icwecwe. Imigca efana 'Ngaba ungangcangcazela ukuba ndingachukumisa imilebe yakho?' yenze inkanuko yothando kunye ne-epic uthando lwe-ballad olongeza umdlalo wedrama kuwo nawuphi na umtshato.
'Andinakuyeka Ukukuthanda' nguMichael Jackson
I-duet ebonakala ngo-1987 ongalibalekiyo Okubi icwecwe. Iqukethe ukubhalwa kwezwi likaSiedah Garrett, kwaye ivule ngemigca ekungekho luthando lungenathemba inokudlula: 'Ndifuna nje ukubeka ecaleni kwakho / Okomzuzwana / Ukhangeleka umhle ngobu busuku / Amehlo akho athandeka / Umlomo wakho iswiti kakhulu.'
Ngoku lixesha lokwenza uluhlu lwakho lweengoma zothando
Ngeengoma ezili-100 zothando oluthandekayo ngalo lonke ixesha onokukhetha kuzo, sinethemba lokuba ufumene ubuncinci iingoma ezimbalwa zokongeza kuluhlu lwakho lokudlala lomtshato. Ukuba ufuna uncedo olungaphezulu ekuyileni uluhlu lwengoma olubonisa isitayile sakho kunye nohambo olwahlukileyo lobuhlobo bakho, cinga ngokusebenza nomtshato we-DJ. Ezi ngoma zemestros zivile konke kwaye zinokubonelela ngezindululo ezenziwe ngokwezifiso ukongeza uncuthu olugqibeleleyo kusuku lwakho olukhethekileyo.
uninzi lweengoma zothando ngalo lonke ixesha
yimalini indawo yomtshato
leliphi elona gama liqhelekileyo eMelika
isitayela seenwele zomtshato zeenwele ezisongiweyo
zenzele owakho umtshakazi
ukutya okuzokuhanjiswa emtshatweni
unxibe ntoni kwiqhina elimnyama